Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Education » Dalxiiska Gaarka ah wuxuu ku deeqay $ 2 milyan oo Kariibiyaanka iyo Aasiya ah
Wararka Anguilla • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dominican Republic • Education • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Waajib ah • Wararka Sri Lanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska
Ku -deeqidda Dalxiiska Gaarka ah
Waqtiga ay u muuqato in waxa aan maalin walba maqalno ay yihiin warar ku saabsan geeri, argagax, mudaaharaadyo, iyo dembi, waxay ku fiicantahay ruuxa inuu maqlo wax si toos ah uga socda adduunka. Sida malaayiin doollar oo loogu deeqo bulshooyinka si loogu taageero waxbarashada. Fikirkaas, ANI Resorts Gaarka ah waxay ku dhawaaqday inay $ 2 milyan ugu deeqday tas -hiilaadka dugsiga iyo kombiyuutarada bulshooyinka maxalliga ah ee ku nool waddan kasta oo hantidoodu ku taal.
Waddan walba wuxuu heli doonaa deeq dhan $ 500,000 oo ay si buuxda u maalgelisay Xarumaha gaarka loo leeyahay ee ANI, iyo Tim Reynolds Foundation.
Hindisaha ayaa ah in la ballaariyo waxbarashada Sayniska Kombiyuutarka lana hagaajiyo tas -hiilaadka waxbarashada, sida kor u qaadidda maktabadaha, iyo fasallada waddamada ay ku yaalliin Xarumaha Gaarka loo leeyahay ee ANI.
Tani waxay sii xoojineysaa ballanqaadkii shirkadda ee ahaa inay ka caawiso waxbarashada iyo taageeridda bulshooyinka maxalliga ah.
Dhismaha si loo horumariyo shaybaarro kombiyuutar oo ku cusub labadaba Anguilla iyo Sri Lanka waxay bilaaban doonaan dabayaaqada sanadkan, waxaana ku xigi doona dugsi hoose oo cusub oo ku yaal magaalada Rio San Juan. Xarumaha gaarka loo leeyahay ee ÀNI ayaa hadda la xiriiraya barayaasha Thai si ay u go'aamiyaan halka $ 500,000 ay faa'ido ugu jirto. Tim Reynolds iyo ÀNI waxay ku faraxsan yihiin inay awood u yeeshaan inay siiyaan bulshooyinka maxalliga ah tas -hiilaad casri ah si ay ugu anfacaan hadda iyo jiilalka soo socda.
Tim Reynolds, oo ah aasaasaha/milkiilaha ANI Resorts Gaarka ah, waa samafale leh ballanqaad xooggan oo ku aaddan hagaajinta tas -hiilaadka farshaxanka iyo waxbarashada adduunka oo dhan. Waxa kale oo uu wax weyn ku soo kordhiyay cilmibaarista caafimaadka iyo tas -hiilaadka - isaga laftiisu waa ka badbaaday dhaawacyada laf -dhabarka ee daran. Tim wuxuu bilaabay si aan macaash doon ahayn Akadeemiyadaha Fanka ee ANI gudaha Thailand, Anguilla, Sri Lanka, Mareykanka, iyo Dominican Republic si ay uga caawiyaan fannaaniinta doonaya inay gaaraan riyooyinkooda ku saleysan farshaxanka iyada oo loo marayo manhaj sawir gacmeed dhammaystiran oo dhammaystiran. Marka lagu daro barnaamijka waxbarashada, akadeemiyaduhu waxay ka caawiyaan ardayda suuqyada iyo iibinta shaqooyinkooda adduunka oo dhan iyada oo loo marayo bandhigyada galaaska, iyo onlaynka iyada oo loo marayo mareegaha loo dalxiis tago: ÀNI Art Gallery. 100% wixii ka soo baxa iibinta dhammaan farshaxanka waxay si toos ah u aadaan fanaaniinta.
Reynolds wuxuu si kibir leh ugu soo bandhigayaa farshaxanka ardayda hoygiisa nasashada iyo martidu waxay u iibsan karaan farshaxanka asalka ah xusuus ahaan joogitaankooda akadeemiyada maxalliga ah.
“Xulashada iyo tayada farshaxanka ee ardayda dhammaan lixda ka mid ah Akadeemiyada Farshaxanka ÀNI waa kuwo aad u cajiib ah. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka qalin -jabino fannaaniin waaweyn iyada oo loo marayo Akadeemiyada muddo tobanaan sano ah waxaana ku faraxsanahay dhismayaasha cusub ee la dhisay si loo ballaariyo dadaalladayada waxbarasho ee ka dhex jira bulshooyinka maxalliga ah, ”ayay xustay Reynolds.
“ÀNI waxaa ka go’an inay sare u qaaddo bulshooyinka aan la wadaagno dadka maxalliga ah oo aan gaarsiinno kombiyuutarrada iyo horumarinta tas -hiilaadka sayniska kombiyuutarka, ardaydu waxay yeelan doonaan awood ay wax ku bartaan oo ay nolol wanaagsan ku helaan iyagoo aan ka tagin beelahooda,” ayuu ku soo gabagabeeyay Tim Reynolds.